“उत्कृष्ट प्रदर्शनको ग्यारेन्टी दिन्छु”: राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षक प्याट्रिक | Hamro Khelkud
“उत्कृष्ट प्रदर्शनको ग्यारेन्टी दिन्छु”: राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षक प्याट्रिक
एन्फाले भर्खरै नियुक्त गरेको बेल्जियन प्रशिक्षक प्याट्रिक ओजेम्सले आजबाट औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्| पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा ३०खेलाडी सहभागी भएका थिए| पहिलो प्रशिक्षण लिएपश्चात हाम्रो खेलकुद डट कमका दिपेश तिमल्सिना ले ओजेम्स संग लिएको छोटो कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ:
राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षक प्याट्रिक ओजेम्स
प्र: पहिलो दिनको अभ्यास कस्तो रह्यो?
उ: नेपाली टिमले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न बाकिं छ र धेरै अभ्यास गर्न बाकी छ । त्यसको लागि समय लाग्छ ।
प्र: भारतसंगको खेलमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो पाउनुभयो?
उ: नेपाली डिफेन्स एकदम राम्रो छ, एकले अर्का लाई निकै सपोर्ट गरेको देखिन्छ, उनिहरुमा दृढता र जुझारुपन देखिन्छ । अट्याकमा निकै कमजोर देखिएको छ, खेलाडिहरु फिजिकल छैनन र भारत सँग धेरै अनावश्यक लामो पास खेलेको थियो खेलाडिहरु टेकनिकल्ल्री निकै राम्रा छन्, सर्ट पासमा फोकस गर्न पर्ने देखिएको छ । टेकनिकल्ल्री खेलेर दुस्मनलाई दुख दिन सक्छन । हामीले बल म्यानेजमेन्ट र कन्सनट्रेसन सुधार्न पर्छ । हामीसँग चार महिना बाकिं छ तर त्यसलाई मैले पहिलो अभ्यास बाट नै फोकस गरेको छु
प्र: अबको राष्ट्रिय टोलीमा के फरक पाउनेछौँ?
उ: मैले राष्ट्रिय लिग बाट ६-७ जना छुट्टै प्रोफाइलको खेलाडी भेट्ने आशा गरेको छु । म सँग नोवेम्बर, डिसेम्बर सम्ममा मैले खोजेको जस्तो टिम हुने छ । अहिलेको खेलाडिहरुमा अन्तर धेरै छ । अब सुरु हुने राष्ट्रिय लिग मैले नयाँ खेलाडी छान्ने मौकाको रुपमा लिएको छु । कोही खेलाडी निकै अनुभवी छन र कोही निकै अनुभवबिहिन छन ।
प्र: अब आउने चार महिनाको तयारी कस्तो हुनेछ?
उ: मैले चार महिनाको लागि प्लानिङ गरिसकेको छु, मैले सेप्टेम्बर २१ सम्ममा नै नयाँ खेलाडिहरु भेट्ने आशा गरेको छु । पहिला टिम सेट भएपछी मात्र म प्लानिङ को अर्को चरणमा काम गर्ने छु । हामी खेलाडिको फिटनेश लेवल मा पनि ध्यान दिने छौ, साएद यो संसार कै सबै भन्दा युवा राष्ट्रिय टोली हो, युवा खेलाडी भए पनि प्रशस्त अनुभव भएका खेलाडी छन । अभ्यास बाट टेक्निकल कुरा मा ध्यान दिएर हामी युवा र अनुभवले भरिएको टोली बनाउने छौ ।
प्र: नेपाललाई बिगतका दुई प्रशिक्षकले साफको सेमीफाईनलसम्म पुर्याएका थिए, यसपाली उपाधि जित्न सकिएला त?
उ: यदी कुनै प्रशिक्षकले टिम सम्हाल्ने बितिकै उपाधि जित्छ भन्छ भने उ ढाँटी रहेको हुन्छ, यदी मैले त्यसो भने भने म नै ढाँटी रहेकै हुन्छु । हामी खेल परिवर्तन गरेर नतिजाको लागि कडा मिहेनत गर्ने छौ । म जितको कसम खादिन तर कडा मेहेनत र राम्रो प्रदर्शनको ग्यारेन्टी दिन्छु । हामी उत्कृष्ट फूटबल खेल्नेछौ ।
प्र: भारतबाहेक साफको अन्य टोलीको प्रदर्शन हेर्नुभएको छ?
उ: मैले अहिलेसम्म साफका अन्य टोलिहरुको प्रदर्शन हेरेको छैन तर अब छिटै भुटान र मल्दिभ्सले चाईनासँग खेल्दै छ, म त्यसको भिडियोहरु हेर्ने छु । चाईनाका कोच मेरो साथी हुन ।
प्र: नेपालले गोल गर्न नसकेको दुइ वर्ष बितिसक्यो, के अब गोल गर्न सक्ला त?
उ: नेपालले गोल गर्न सक्छ र त्यसको लागि हामी अभ्यासमा कडा मेहेनत गर्ने छौ । म अट्याकिङ फूटबल खेलाउने कोच हूँ र म त्यो गोल छिटै निस्किनेमा बिश्वस्त छु । म टिमलाई राम्रो मुभ बनाएर कसरी गोल हान्ने सिकाउछु ।
प्र: भारतको प्रदर्शन कस्तो लाग्यो?
उ: भारत निकै नै ठुलो देश हो तर नेपाललाई हराउन सकेन, उनिहरु सँग निकै राम्रा खेलाडिहरु छन् तर उनिहरु ले धेरै ठाउँमा प्रगती गर्नपर्ने देखिन्छ । उनिहरु भन्दा टेकनिकल्ल्री नेपाल धेरै आगाडी छ ।
प्र: यु-१९ टोलीको विषयमा के भन्नुहुन्छ?
उ: यु-१९ टिम एकदम राम्रो छ, खेलडिहरु निकै प्रतिभाशाली छन्, राष्ट्रिय टोलीमा भएका बाहेक अरु खेलाडीहरुले पनि निकै उत्कृष्ट खेले । अहिलेको राष्ट्रिय टोली युवा भए पनि हामीले निरन्तर यु-१९ का खेलडिहरुमाथि नजर राख्नुपर्छ, यसले नेपाललाई पछीसम्म पनि निकै फाईदा गर्छ ।
प्र: नेपाली फुटबलको बारेमा के थाहा छ?
उ: मैले चाईनामा तीन बर्ष काम गरेको भए पनि मलाई नेपाली फूटबल बारे केहि पनि थाहा थिएन । मैले एन्फा सँग कन्ट्याक्ट भएपछी मात्र नेपाली फुटबलबारे रिसर्च गर्न थालेको हुं ।
प्र: हजुरको युरोपमा काम गरेको थुप्रै अनुभव छ, के यो अनुभवले नेपाली खेलाडीलाई युरोपको ढोका खोल्न सहयोग पुग्ला?
उ: मलाई नेपाल आएपछी मात्र ५-६ वटा कोही राम्रो खेलाडी छ कि भनेर यूरोप बाट फोन आइरखेको छ । म उत्कृष्ट खेलाडिहरु लाई यूरोपमा एक्स्पोजरको लागि पठाउन प्रायस गर्नेछु । म बेनिनमा हुँदा पनि मैले ६ जना खेलाडी लाई यूरोप पठाएको थिए र अहिले पनि ५ जना यूरोपको माथिल्लो दर्जाको फूटबल खेलिरखेका छन ।